Maxaa laga filan karaa Shirka Golaha wada-tashiga Qaran ee Doorashooyinka ? (VIDEO) – Idil News
Maxaa laga filan karaa Shirka Golaha wada-tashiga Qaran ee Doorashooyinka ? (VIDEO)
Golaha wada-tashiga Qaran ee Doorashooyinka oo ka kooban Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxda Dowlad Gobaleedyada ayaa sabtida soo socota yeelanaya kulan deg deg ah oo looga hadlayo waxyaabaha ka hirgalay heshiiskii 27-May.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Idilnews u sheegay, inay Madaxdu isku raaci doonaan, Ra’iisul Wasaare Rooble saxiixi doono Madaxda ku kulmi doonta Muqdisho maalmaha soo socda dhawr Qodob oo wax ka badalid ah,sida ay sheegayaan ilo muhiim ah.
In doorasha lagu qabto hal Magaalo.
2.In Ergrada waxdooranaysa laga dhigo 51.
Arinkaa waxaa soo jeediyey Maamulada Hirshabeele,Galmudug,Koonfur-galbeed iyo Jubaland.